Fikarakarana mani-pofona mamy | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fikarakarana mani-pofona mamy
Inona no tokony ho fantatrao momba ny fambolena
Ny dipoavatra mamy dia tena be mpitia eo amin'ireo mpamboly legioma. Ary izany dia nohazavaina tamin'ny maro. Manana vitaminina sy mineraly maro be izy io, izay mihoatra ny voatabia sy ny atody, ary tsy misy mitovy amin'ny asidra ascorbic. Ny Pepper dia hikarakarana sakafo amin'ny latabatra fialantsasatra, dia hanome azy ny fanandramana sy ny fofona.
Fomba hanomezana sakafo ny dipoavatra rehefa mamboly eny amin'ny tany malalaka
Maro ny zaridaina mampitombo ny doka eo amin'ny teti-dratsiny. Ny fambolena zana-ketsa an'io zavamaniry mahasoa io dia mitranga mandritra ny vanim-potoana mafana ary mitaky fikarakarana tsara. Rehefa nomeny ny dipoavatra miaraka amin'ny rano sy ny sakafo ilaina, dia azonao antoka tsara ny vokatra tsara. Ny fiompiana karazam-boankazo dia manomboka amin'ny fambolena karazan-kazo iray.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fikarakarana mani-pofona mamy